အားဘာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ABBA ဆိုသည်မှာ ဆွီဒင်နိုင်ငံ၌ ၁၉၇၂ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ကာ ပေါ့ပ်သီချင်းများကို သီဆိုဖျော်ဖြေသည့် အဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ᗅᗺᗷᗅ ဟူ၍ တံဆိပ်ကို အသုံးပြုထားခြင်းမှာ၊ အဖွဲ့သားအမည်တို့၏ ပထမအက္ခရာများကို ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ Agnetha Fältskog (အနီးယာတာ ဖဲစခုဂ်) ၊ Björn Ulvaeus (ဗြောန် အိုလ်ဗေးယို့စ်) ၊ Benny Andersson (ဘန်နီ အန်ဒါရှောန်) နှင့် Anni-Frid Lyngstad (အန်နီ-ဖရိ လင့်စတော့) တို့ဖြစ်ကြသည်။
၁၉၇၄ တွင် တွေ့ရသော အားဘာအဖွဲ့ (ဘယ်မှ)
ဘန်နီ အန်ဒါရှောန် ၊ အန်နီ-ဖရိ လင့်စတော့
အနီးယာတာ ဖဲစခုဂ် နှင့် ဗြောန် အိုလ်ဗေးယို့စ်
Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid (၁၉၇၂–၁၉၇၃)
အဖွဲ့သည် ပေါ့ပ်ဂီတနယ်ပယ်တွင် ၁၉၇၄ မှ ၁၉၈၃ အထိ ကမ္ဘာအနှံ့ ဂီတဇယားများ၏ ထိပ်တွင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကာ စီပွားရေးအရ အအောင်မြင်ဆုံး အဖွဲ့များအနက် တစ်ဖွဲ့ဖြစ်၏။ အားဘာအဖွဲ့သည် ယူရိုဗီးရှင်းသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ (Eurovision Song Contest) မှ ဆွီဒင်နိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး အနိုင်ရရှိခဲ့သူများဖြစ်၍ အနိုင်ရသီချင်းမှာ Waterloo သီချင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ၌ ထိုပြိုင်ပွဲ၏ နှစ်ငါးဆယ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် ပြိုင်ပွဲ၏ သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးသီချင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သောနှစ်ကာလများအတွင်း ဇနီးမောင်နှံနှစ်တွဲဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ဖဲစခုဂ် နှင့် အိုလ်ဗေးယို့စ် ၊ လင့်စတော့ နှင့် အန်ဒါရှောန် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ရေပန်းစားလူကြိုက်များလာမှုနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂလိကရေးရာများမှာ ပွန်းရှခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး၌ အိမ်ထောင်နှစ်ခုစလုံး ပြိုကွဲခဲ့သည်။ ထိုဆက်ဆံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုများသည် အဖွဲ့၏ ဂီတအပေါ်တွင်လည်း အကြုံးဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့၍ နောက်ပိုင်းရေးဖွဲ့ခဲ့သည့် သီချင်းစာသားများ၌ အမှောင်ဖက်လွှမ်းသော၊ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်စမ်းစစ်သည့် စာသားများ ပို၍ ပါဝင်လာခဲ့လေသည်။ အားဘာအဖွဲ့ ပြိုကွဲပြီးနောက် အန်းဒါရှော့န် နှင့် အိုလ်ဗေးယို့စ် တို့က တင်ဆက်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် ဂီတများစပ်ဆိုကြ၍ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖက်၌ လင့်စတော့နှင့် ဖဲစခုဂ်တို့သည် တစ်ကိုယ်တော်ပုံစံများဖြသ့်သာ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ၏။
အဖွဲ့ပြိုကွဲပြီး ဆယ်နှစ်အကြာ ABBA Gold ဟုခေါ်သော လက်ရွေးစဉ်အခွေတစ်ခွေကို ဖြန့်ချိခဲ့ကြ၍ ကမ္ဘာအနှံ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး တေးအခွေတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၁၉၉၉တွင် အားဘာအဖွဲ့၏ ဂီတသီချင်းများကို အခြေခံ၍ မာမာမီးယာ (Mamma Mia!) ဂီတပြဇာတ်ကို ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြေဖျော်ခဲ့ကြကာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ Mamma Mia! (မာမာမီးယာ) ဟုပင် အမည်ပေးထားသော ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၀၈ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ကာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၌ စုစုပေါင်းဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်လေသည်။ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကား Mamma Mia! Here We Go Again ကို ၂၀၁၈ ၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမရှိသော ၃၅ နှစ်တာကာလများအလွန်၌ သီချင်းအသစ်နှစ်ပုဒ်ကို အသံသွင်းထားပြီဟူ၍ ကြေငြာခဲ့၏။
အဖွဲ့သည် တေးအချပ်ရေ ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းအား သန်း ၁၅၀ နှင့် သန်း ၃၈၀ ကျော်ကြားရှိ၍ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဂီတအနုပညာရှင်များထဲတွင် ပါဝင်၏။ အားဘာအဖွဲ့သည် အင်္ဂလိပ်စကားမပြောသောနိုင်ငံမှ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများတွင် တသတ်မတ်အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့သည့် ပထမဆုံး ဂီတအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ကာ အမေရိက၊ ယူနိုက်တကါကင်းဒမ်း၊ အိုင်ယာလန်၊ ကနေဒါ၊ ဩစတေးလျ၊ နယူးဇီလန်နှင့် တောင်အာဖရိက ဂီတဇယားများတွင် အောင်မြင်မှုများ ရယူနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ဆွီဒင်ဂီတအဖွဲ့များအနက် သမိုင်းတစ်လျှောက် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးလည်း ဖြစ်ကာ ဥရောပတိုက်မှ ရောင်းအားအမြင့်ဆုံး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပြန်သည်။ အားဘာအဖွဲ့သည် ယူကေ၌ နံပါတ်တစ်အဖြစ် တေးအခွေရှစ်ခုကို ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သည်။ လက်တင်အမရေိက၌လည်း သိသာထင်ရှားသည့် အောင်မြင်မှုရခဲ့ကာ ၎င်းတို့၏ အောင်မြင်ကျော်ကြားသီချင်းများကို လက်ရွေးစဉ်ပြု၍ စပိန်ဘာသာဖြင့် သီဆိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့ကို ရော့ခ်အန်ရိုးလ် ဂုဏ်ပြချီးမြှောက်မှု (Rock and Roll Hall of Fame) အတွင်းသို့ ၂၀၁၀ တွင် ထည့်သွင်းချီးမြောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ရောက်သောအခါ ၎င်းတို့၏ Dancing Queen သီချင်းအား တေးသံသွင်းဆိုင်ရ အကယ်ဒမီ (Recording Academy) ၏ ဂရမ်မီ ဂုဏ်ပြုချီးမြောက်မှု (Grammy Hall of Fame) ထဲသို့ သွတ်သွင်းချီးမြောက်ခဲ့ကြသည်။
↑ Moskowitz၊ David V. (31 October 2015)။ The 100 Greatest Bands of All Time: A Guide to the Legends Who Rocked the World။ GREENWOOD Publishing Group Incorporated။ p. 1။ ISBN 978-1440803390။
↑ "Abba Win 'Eurovision 50th' Vote"၊ BBC News၊ 23 October 2005။ 20 July 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Benny Andersson (in en-us)။ 21 September 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Björn Ulvaeus (in en-us)။ 25 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Agnetha Fältskog (in en-us)။ 27 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Anni-Frid Lyngstad (in en-us)။
↑ ABBA Reunite, Announce New Songs။ 29 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ @abbaofficial on Instagram: #abbaofficial #abba။ 29 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Trauth၊ Beti။ "ABBA music enhances 'Mamma Mia!' at the Van Duzer"၊ Times-Standard၊ 28 February 2012။ 19 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 May 2014။
↑ Celebrities။ 10 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "ABBA Tribute Announced for River Moselle"၊ The Luxembourg Chronicle၊ January 19, 2019။ July 15, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "ABBA Makes Rock and Roll Hall of Fame Los Angeles Times 16 December 2009"၊ 16 December 2009။ 23 August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GRAMMY Hall Of Fame Class Of 2015 (16 December 2014)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အားဘာ&oldid=627187" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၃:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၃:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။